Chineke ebighi ebi
Portal okpukpe na Katọlik
ekwu okwu banyere chi
Olee onyinye ndị anyị na-enweta n’oge baptizim?
Category: ekwu okwu banyere chi 0
Olee aha anyị na-enweta mgbe e mere anyị baptizim? A ghaghị ime anyị baptizim maka mgbaghara nke mmehie anyị Pita onyeozi dụrụ n’ọdụ, sị: “...Chegharịanụ, ka e meekwa unu nile baptizim n’aha…
Ajụjụ a na-ajụkarị: Gịnị bụ Siza na Baịbụl?
Gịnị bụ Siza n'Akwụkwọ Nsọ? A na-ejikarị okwu ahụ bụ "Caesar" eme ihe, na mba ndị nwere omenala Ndị Kraịst, iji chọpụta ike oge (na-emegide ike ...
Ị jụrụ: Olee otú mgbanwe okpukpe si bụrụ?
Gịnị ka mgbanwe okpukpe pụtara? GỊNỊ BỤ Mgbanwe Okpukpe… A maara Ndozigharị Protestant—ma ọ bụ, n’ụzọ dị mfe, Ndozigharị—dị ka òtù okpukpe Ndị Kraịst nke malitere na Germany na…
Azịza kacha mma: Gịnị ka ikpe ekpere novena pụtara?
Olee otú e kwesịrị isi na-ekwusa Okwu Chineke? Kedu ka esi eme novena? Iji kpee ekpere novena a, ị ga-ekperịrị ekpere ụbọchị ọ bụla ekpere ịmalite, ekpere...
Ajụjụ: Ònye bụ Eze Sọl dị ka Bible si kwuo?
Ònye gburu Eze Sọl nke Baịbụl? Eze ahụ e merụrụ ahụ, chere na ndị Filistia ga-eweghara ya, ọ rịọrọ onye na-ebu ihe agha ya ka o gbuo ya, ma…
Kedu ihe bụ agụụ mmekọahụ na Ụka ​​Katọlik?
Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara agụụ mmekọahụ? Ya mere, a na-ewere agụụ ihe ọjọọ dị ka omume mmehie ma ọ bụ omume rụrụ arụ, dịka e gosiri na Akwụkwọ Nsọ n'akwụkwọ...
Gịnị bụ chi nke okpukpe ọdịnala ndị China?
Gịnị bụ okpukpe ọdịnala? Okpukpe ọdịnala gbadoro ụkwụ na emume siri ike nke mgbanwe nke ndị dị ndụ na ndị nna nna ha yana n'aka nke ya na…
Gịnị bụ ọrụ Ụka Katọlik?
Gịnị bụ ọrụ Ụka Katọlik? N'ime ọrụ atọ ya dị mkpa bụ: nkuzi, do nsọ na ọchịchị, nke na-etolite otu; n'ihi nke a...
Gịnị bụ mmehie na-egbu egbu Ban?
Ònye bụ Mpụ na mmehie 7 na-egbu egbu? Mwepu (Nanatsu no Taizai) Onye na-arụ ọrụ mmachibido iwu nke Mmehie asaa na-egbu egbu sitere na ọhịa nke Fairy King Kingdom of Lions…
Ajụjụ: Olee otú ndị Rom si mebie Iso Ụzọ Kraịst?
Gịnị mere ndị Rom ji kpagbuo Ndị Kraịst? Ihe kpatara mkpagbu ahụ kachasị bụ, n'akụkụ ndị Juu, ozizi nduhie pụtara ìhè na…
1 2 ... 6,338 Osote
N'okwuchukwu ya, ọ kụziiri ndị parish na ọrụ abụghị ọbụbụ ọnụ, kama ọ bụ ụzọ nzọpụta, ya mere Arcangelo Tadini nwere mmetụta na-apụtaghị ìhè na mmepe nke nkuzi mmekọrịta ọha na eze nke Chọọchị Katọlik.
Gịnị ka Jizọs wụsara ndịozi ya?
Olee otú imeri obi ilu dị ka Akwụkwọ Nsọ?
Kedu ihe bụ eziokwu okpukpe na kedụ mmalite ya?
Olee mgbe Jizọs họọrọ ndịozi iri na abụọ ahụ?
Gịnị mere Judas mgbe ọ raara Jizọs nye?
Ị jụrụ: Gịnị ka ahịhịa pụtara na Baịbụl?
Azịza kacha mma: Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara Mọdekaị?
© 2022 Chineke ebighi ebi